Amafutha kakhukhunathi - iSearch
Qala Ama-Superfoods amafutha uwoyela kakhukhunathi
1 Amafutha kakhukhunathi - ukuphatha umzimba wonke
2 Imiphumela yomkhiqizo
2.1 Umphumela esikhumbeni
2.2 Isicelo sangaphakathi
3 Umkhiqizo ungathengwa ngaziphi izinhlobo?
4 Ubona kanjani umkhiqizo wekhwalithi ephezulu?
5 Izipesheli zabakhiqizi bekhwalithi eliphezulu
6 Imikhiqizo engcono kakhulu nesicelo sabo kuvidiyo
7 Ucwaningo lwamuva
8 Ukuthenga okuzuzayo ku-intanethi
Amafutha kakhukhunathi - ukuphatha umzimba wonke
uwoyela kakhukhunathi isetshenziselwe iminyaka yesicelo sangaphakathi nangaphandle. Ngenxa yezithako zalo eziwusizo, amafutha anganciphisa ngisho noma aphulukise izifo eziningi. Isayensi isematasa ekuhloleni izindlela eziningi zesenzo salolu remedy engokwemvelo engavamile.
Amafutha kakhukhunathi anemisebenzi eminingi ehlukene ngenxa yezithako eziwusizo. Lokhu kuqukethe ama-amino acids, amavithamini, amaminerali, ama-antioxidants kanye ne-lauric acid. Ngayinye yalezi zithako ezisebenzayo igcwalisa umphumela othile emzimbeni futhi ngaleyo ndlela inika isenzo esiningi. Amafutha angasetshenziswa esikhumbeni ukuze asetshenziswe ngaphandle noma athathwe.
Amafutha kakhukhunathi inhle kakhulu ekuphatheni izinkinga ezihlukahlukene zesikhumba. Amafutha anomphumela wokulwa nokuvuvukala futhi ngaleyo ndlela angafaka isandla eqinisweni lokuthi i-foci encane yokuphulukisa iphola ngokushesha emgodini kodwa nase-atopic dermatitis. I-Lauric acid, enye yezithako ezibaluleke kunazo zonke zamafutha, ikwazi ukubulala noma yiluphi uhlobo lwebhaktheriya, amagciwane namagciwane. Ngale ndlela, ukuvuvukala kungakhululwa ngokushesha. Amafutha anomoya omnene, ngakho-ke angasetshenziswa ngisho nasezindaweni ezibucayi zesikhumba, ngaphandle kokubangela imiphumela emibi engadingeki.
Umkhiqizo uyasiza ekunakekeleni isikhumba esinempilo futhi ungasetshenziswa ekunakekeleni ubuso. Amafutha angavikela isikhumba emanzini nezinye izinguquko. With izithako zayo high-quality, ngaso sonke isikhathi sikwazi ukunikeza isikhumba ngobuningi obanele. Ngaphezu kwalokho, yakha uhlobo oluthile lokuzivikela, okuyinto isikhumba esibucayi esingagcinwa emithonjeni eminingi yemvelo efana nokushisa okushisayo, ukukhipha amagesi, ukushisa nokukhanya kwe-UV. Ngale ndlela ungagcina ukubukeka okuncane isikhathi eside.
Intando ejabulisayo uwoyela kakhukhunathi futhi isetshenziselwa ukunakekelwa komlomo futhi ibukeka inomsoco kunanoma iyiphi i-lip balm. Amafutha angasetshenziswa ezindebeni futhi asekele isakhiwo semvelo sesikhumba somlomo. Izindebe aziwomile kanye nokuqhekeka okuncane, okungenzeka ukuthi kubangelwa ukuma, uphilise ngokushesha. Ngenxa yomphumela we-antibacterial wamafutha nama-herpes blisters angathathwa ngokushesha ukuphulukisa. Njengoba lokhu ukunakekelwa kwe-lip kusebenza ngokuphelele ngaphandle kwezithasiselo zamakhemikhali, kungasetshenziswa njalo, ngaphandle kokulimaza isikhumba somlomo.
I-scalp nezinwele nazo zingazuza emafutheni kakhukhunathi. Abantu abaningi abahlukunyezwa izinwele, izinwele noma ukuphunga izinwele nezinwele ezinamahloni bayazi ukuthi imikhiqizo yezimonyo ngokuvamile ayikwazi ukuxazulula lezi zinkinga. Amafutha kakhukhunathi angamane ahlaziyeke abe yi-scalp futhi agxotshwe ngemuva kwesikhashana sesenzo. Ngakho uyancipha izinwele namavithamini afakwe emafutheni ahlinzeke ngokukhanya okusha. Ngokudla okunjalo eHaarboden kungancipha ezimweni eziningi, ukulahlekelwa izinwele.
Esinye isicelo sezithokozi i-oyela kakhukhunathi njengenhlawulo yemvelo. Umkhiqizo ukondla isikhumba esibucayi se-armpits nama-bacteria abangela iphunga abhujiswa. Lokhu kuvimbela iphunga elikhukhulayo ngaphandle kokusebenzisa ama-deodorants akhiqizwa ngamakhemikhali, okuvame ukuhambisana nomdlavuza.
Futhi, ukusetshenziswa kwe uwoyela kakhukhunathi kuboniswa izifo eziningi. I-Lauric Acid iphelele ekusekeleni amasosha omzimba omzimba. Yena uyakwazi ngivule ulwelwesi cell lamagciwane futhi sibabulale. Umzimba ngokwayo ungethele lauric acid ngokwanele, namafutha kakhukhunathi lwakha umthombo ekahle lokhu umuthi obalulekile. By izakhiwo elwa namagciwane futhi elwa namagciwane ekusakazekeni herpes Lingase uvinjelwe.
Ucwaningo oluningi lwesayensi luye lwafakazela ukuthi amafutha kakhukhunathi angasebenza ngempumelelo ekuguleni okukhulu. Lokhu kuhlanganisa, isibonelo, i-Alzheimer's. Amacala ambalwa okuthiwa yi-Alzheimer's disease abikwa ukuthi ayenzeka emazweni lapho le mayela asetshenziselwa ukupheka. Kuye kwafakazelwa ukuthi amafutha kakhukhunathi angamisa lesi sifo futhi abe nomthelela wokuphulukisa. Lo mphumela uxhomeke kuma-ketoni, anganikezwa ngamafutha kakhukhunathi ebuchosheni ukuguqula i-glucose ibe amandla.
Ukudla amafutha kakhukhunathi njalo kungasiza ekuvikeleni umdlavuza. Amafutha akwandisa kakhulu inani le-enzyme e-antioxidant emzimbeni. Lezi zinkimbinkimbi zivimbela ukukhula kwamangqamuzana omdlavuza.
Okumangalisayo kuyimpembelelo yamafutha kakhukhunathi ngesifo sikaParkinson. Ama-enzyme afanayo avimbela ukwanda komdlavuza nawo anomthelela omuhle kumangqamuzana omzimba wesisindo. Ngakho-ke ezinye izifo zesifo ezesabekayo zikaParkinson zingakwazi ukunciphisa amafutha noma ukuthuthukiswa kungagwenywa.
Umkhiqizo ungathengwa ngaziphi izinhlobo?
uwoyela kakhukhunathi liqinile lapho libandayo futhi liqukethe kuphela lapho lengezwe ngokushisa. Kubathengisi abaningi, umkhiqizo utholakala ngezibuko. Ngokuyisisekelo, umuntu uhlukanisa phakathi kwamafutha ekhukhunathi ahlanjululwe futhi azalwa. Encwadini elicwengileko, inyama yekakhukhunathi isomile kuqala. Khona-ke amafutha asulwa emanzini omisiwe. Ngemuva kwalokho, umkhiqizo uhlanjululwa ukwelashwa kwamakhemikhali ukuze amafutha nama-flavour asuswe. Ngakho-ke, inyama ye-coke esetshenziselwa le nqubo akudingeki ukuba ihlanzeke ngokuphelele. Naphezu kwalolu hlelo, i-asidi lauric ivame ukulondolozwa kahle. Noma kunjalo, kufanele uqaphele uma ukwelapha amafutha ahlanzekile nge-hydrogen. Ezimweni ezinjalo, amafutha esitokisi angenza ifomu elingakhuphula amazinga e-cholesterol. Amafutha kakhukhunathi acwengisiwe ngokuvamile ahlinzekwa ngaphansi kwegama elithi "RBD".
Ngokuphambene nalokho, kukhona amafutha asendabuko, okubizwa nangokuthi "i-VCO". Lawa mafutha atholakala ngezinqubo ezimbalwa ezinomshini futhi akumelwe adicilelwe noma ahlehliswe. Imikhiqizo eminingi yalolu hlobo ikhiqizwa yi-okuthiwa indlela eyomile. I-coconut inyama isomile kuqala elangeni noma kuma-ovens amakhulu ezimboni. Ngemuva kwaloko, amafutha abanda kakhulu acindezelwe ngaphandle kokushisa. Amafutha akhiqizwa ngale ndlela aqukethe umswakama omncane futhi ngakho-ke unomphela iminyaka ezayo.
Ngendlela emanzi, noma kunjalo, kusetshenziswe inyama entsha yesikhokhamba. Ubisi lwekakhukhunathi luxoshwa ngaphandle kwenyama ngaphandle kokushisa. Kunezindlela eziningana zokuhlukanisa amafutha nobisi lwekakhukhunathi ngemuva kwalokho. Uhlobo olungcono kakhulu nolunezintandokazi zezindlela ze-centrifugal.
I-PureBIO uwoyela kakhukhunathi i-1000ml (1L) ye-HAIR, SKIN ne-COOKING - uwoyela ophekiwe kakhukhunathi, owomdabu nocindezelwe obandayo
Ukusuka ekutshalweni okulawulwa okuvela eSri Lanka
Kufaneleka ukupheka, ukupheka nokupheka
Ukunakekela umkhiqizo wezinwele nesikhumba
Ukunakekelwa komkhiqizo kanye nezilwane
Zokwemvelo, ezomdabu, ezicindezelekile ezibandayo, ukudla okuluhlaza, eziphilayo, ezemvelo
Ubona kanjani umkhiqizo wekhwalithi ephezulu?
Amafutha kakhukhunathi ngokuyinhloko umkhiqizo wemvelo onokwethenjelwa enezindawo eziningi ezinhle. Kodwa-ke, kunemibono ebalulekile yekhwalithi ehlobene kakhulu nendlela yokukhiqiza. Uma amafutha anombala ophuzi, kungacatshangwa ukuthi uye wakhiqizwa ngaphansi kwethonya lokushisa, ngenxa yalokho izithako eziningi ezisebenzayo zilahlekile. Lapho uthengisa, umuntu kufanele aqaphele kuqala ilebula ephilayo, eqinisekisa ukuthi kuphela ama coconut asetshenziswa yi-cocos plantations ephethwe ngokuvumelana neziqondiso zemvelo. Ngokubaluleka ikakhulukazi amafutha akhiqizwa abambisene nabancane. Ngaphezu kwalokho, umuntu kufanele akhethe amafutha omdabu, okwakhiqizwa yi-method wet kanye ne-centrifuge technology. Ngaphezu kwalokho, kuyinto efiselekayo ukuthi amafutha aqukethe umswakama omncane kuphela ukuze amafutha ahlale isikhathi eside.
Izipesheli zabakhiqizi bekhwalithi eliphezulu
Umkhiqizo omkhulu wekhwalithi utholakala ku-Mituso. Umkhiqizo owubona ku-intanethi ngaphansi kwegama
i-mituso organic okhuni kakhukhunathi, umdabu, i-1er Pack (1 x 1000 ml) ekubonisweni kwesilazi
I-Mituso Organic Coconut Amafutha endabuko aqukethe kufika ku-53% lauric acid ne-caponic acid aze afike ku-8%, i-capric acid aze afike ku-6,5%.
Ikhwalithi ye-organic esezingeni lokuqala kusuka ekucindezelweni okubandayo kokuqala nokulinyazwa kokulinywa kwamapulazi amancane eSri Lanka.
Ukudla okugayiwe, i-vegan, i-gluten-free ne-lactose-free, i-trans-fatty acid-free, engenazithelo, enobumba, eyenziwe lukhuni noma ehlanganisiwe.
Amafutha ethu kakhukhunathi ayashintshashintshwa, ukuthosa nokubhaka, i-wok nokuvusa-gazinga, okusakazeka nososo.
Ibuye isetshenziswe kwezimonyo zesikhumba nezinwele.
ikhiqizwa ezikhukhunjini eziphilayo emapulazini amancane aseSri Lanka. Amafutha akhiqizwa ngokucindezela okubandayo, ukuze zonke izithako ezibalulekile zigcinwe. Umkhiqizo ngamaphesenti angu-100 azalwa uwoyela kakhukhunathilokho akukhululekile kunoma yiziphi izithasiselo zamakhemikhali.
Omunye umkhiqizo omuhle kakhulu ungaphansi kwenombolo
U-Ölmühle Solling ioli ekhukhukathika yama-coconut i-nativ esitokisini sokubamba i-1000ml inkomba
Ikhwalithi ephakeme kakhulu ye-premium kusuka ku-1. Ukucindezela kwamafutha - I-Virgin koconut Oil
Amaphesenti angu-100 wamafutha kakhukhunathi asuka ku-agricultural certified / EC EC organic organic
Akuhlululwanga, kungabi lukhuni, hhayi ku-bleached, hhayi kudayiswa - kugxilwe kusuka kumpulp fresh
Ukuhlala okulawulwa yi-laboratories ekhethekile eqinisekisiwe eJalimane
I-VEGAN ne-lactose mahhala, ecebile nge-lauric acid
enikezwa ngamatshe okugcoba uSolling. Lo mkhiqizo ukhiqizwa ngamakhukoni aphilayo aseSri Lanka. Umkhiqizo uhlanganisa uphawu oluphilayo futhi luzalwa. Ukuhlanzeka komkhiqizo kuqinisekisiwe ngokuhlola njalo ngama laboratories ezimele eJalimane.
Imikhiqizo engcono kakhulu nesicelo sabo kuvidiyo
Imodi yokusebenza ehambisanayo ye- uwoyela kakhukhunathi Ngisho nezifo ezimbi, abantu abaningi bayamangala ngaso sonke isikhathi. Ngakho kuyathakazelisa kakhulu ukulalela imibono yobuchwepheshe esihlokweni. Isibonelo, i-youtube inevidiyo efundisa indlela yokuqonda kangcono imiphumela yamafutha ebuchosheni neminye imisebenzi yomzimba.
Umkhuba omusha wokusebenzisa amafutha okwelashwa kwe-dementias efana ne-Alzheimer's ichazwa futhi iphinde ivezwe ngokuzwakalayo kumuntu obeka eceleni.
Nakuba imiphumela etholakala ezifundweni zesayensi ezakhiweni zamafutha kakhukhunathi futhi umphumela wabo ezifweni ezimbi ziyamangaza, iningi labantu linesithakazelo ekuthandeni kwamafutha. Kuvidiyo ye-YouTube ungathola ukubuka okusheshayo kokuthi umkhiqizo ungasetshenziswa kanjani.
Yiqiniso, kubalulekile ngaphakathi nangaphandle kwesicelo ukuthenga umkhiqizo wekhwalithi.
Imiphumela kuze kube manje ngezifundo ngale ndaba Kokosöl ukhuthaze ososayensi ukuba bacwaninge ngokuqhubekayo okusetshenziswayo. Ku-2016, isibonelo, umphumela wamafutha emdlavuza wokugcoba wawuphenywe ocwaningweni. Lo mdlavuza ungomunye wamagciwane ejwayelekile kunazo zonke emadodeni nakwabesifazane. Ucwaningo lwaluqhutshwa ososayensi baseMelika be-University of Adelaide futhi lanyatheliswa kuyi-Cancer Research Journal. I-asidi lauric equkethe amafutha kakhukhunathi akwazi ukubhubhisa amaphesenti angu-90 wamangqamuzana omdlavuza wekoloni ezinsukwini ezimbili. Naphezu kokuntuleka kwezinsiza zokwenza lezi zifundo eziphilayo, ukutholakala kubhekwe njengento engavamile ekufuneni izindlela ezithandekayo zokwelashwa komdlavuza. Ucwaningo lubuye lusekelwe yizifundo ezenziwa ezilwaneni eKoconut Research Center eMbusweni waseColorado. Kuye kwaboniswa ukuthi amangqamuzana omdlavuza akaqhubeki ukukhula ezilwaneni ezithola ukufakwa kwale mafutha.
Amafutha kakhukhunathi nawo aletha ukuphumula kweziguli zamakhemikhali. Kuye kwafakazelwa ukuthi ukutholakala kwansuku zonke kwamafutha kakhukhunathi kungalimaza imiphumela emibi kakhulu evame ukuhamba nayo.
I lauric acid eziqukethwe uwoyela, manje kubhekwe sinethemba elikhulu ocwaningweni umdlavuza, ngakho nokucabanga ulungisiswa ukuthi ungazivikela ngezinga elithile ngaphambi ukuqala umdlavuza ngokudla umkhiqizo.
Ukuthenga okuzuzayo ku-intanethi
Uma uwoyela kakhukhunathi ekudleni kwakho, noma ofuna ukusebenzisa ukunakekela ubuhle, unethuba elihle kakhulu kwi-intanethi ukuthenga umkhiqizo. Kunokukhethwa okukhulu kakhulu okunikezwayo, njengokwesitolo se-bio. Ngakho ungabheka izincazelo zomkhiqizo ngamunye ngesikhathi sokuzilibazisa futhi uthole umkhiqizo ophezulu ngempela lapho izithako ezibalulekile ezisebenzayo zingashintshi. Ungaphinda ubheke ukuqhathaniswa komkhiqizo nokuhlolwa bese uthola ukuthi yikuphi izwe elivela kuwo imikhiqizo evela kuyo. Ama-Bio-seal kanye nezilawuli ezizimele ziyatholakala kumkhiqizo ngamunye futhi ziqhubeke ukukusiza ukuthola amafutha we-premium grade. Enye inzuzo yokuthenga kwi-inthanethi ukuthi ezimweni eziningi ungagcina ekuthengeni uma kuqhathaniswa nesitolo se-bio noma isitolo sokudla sezempilo. Ngaphezu kwalokho, kuyinto ejabulisayo ukuhlola imikhiqizo ohlelweni lwakho siqu kukhompyutha bese uvele unikeze umyalelo. Ngakho-ke awugcini imali kuphela, kodwa futhi isikhathi.
Ukwakhiwa kwamakhaza acindezelweyo, okuphilayo uwoyela kakhukhunathi kuyinto engavamile futhi yenza lo mkhiqizo ube isipho semvelo esingathinta kahle umzimba ngezindlela eziningi. Amafutha iwukuba 92 amaphesenti elihlale okunamafutha acid, okuyinto ziwumthombo obalulekile yamandla ezikhungweni zokuphehla emzimbeni. Ngo 62 amaphesenti okuyinto naphakathi uchungechunge fatty acid lapho lauric acid has nengxenye enkulu. Lokhu kubaluleke kakhulu ngokugcina amasosha omzimba. Ngesikhathi sokuhlushwa okufanayo, i-lauric acid itholakala kuphela ebisi lwebele. Izifundo okuye kwenziwa kuye kwabonisa ukuthi lauric acid caprylic acid, futhi eziqukethwe uwoyela kakhukhunathi, bayakwazi ukubulala amagciwane nezinye lamagciwane abanga izifo ezifana strep emphinjeni, isinye nezifo, ukuvuvukala rheumatism, inyumoniya, meningitis, izifo zangasese, izilonda esiswini kanye kubangela ezinye izifo eziningi. Ukutheleleka kwamafayalini noma ukutheleleka ngegciwane njenge-herpes nesimungumungwane kungelashwa ngamafutha.
Ungafaka amafutha ekudleni kwakho ngezindlela ezihlukahlukene. Ingafuthelwa ku-177 ° C ngaphandle kokwenza ama-radicals mahhala. Ngakho-ke, ungayisebenzisa kahle ukupheka nokupheka. Nge ukunambitheka kwalo okuthakazelisayo, kubuye kulungele amasaladi. Amafutha angabuye athathwe ngokuqondile, okunconywa kakhulu uma kwenzeka ukugula. Ngaphezu kwalokho, amafutha omkhukhunathi anamaqanda angabanda angasetshenziselwa ukunakekelwa kwezilonda zangaphandle nokunakekelwa kwesikhumba.
Okuqukethwe okukhulunywe lapha kungenxa yolwazi lokungathathi hlangothi nemfundo ejwayelekile kuphela. Le datha ayibandakanyi ukuvuma noma ukunyusa izindlela zokuxilonga, ukwelashwa echazwe noma okukhulunywa noma izidakamizwa. Umbhalo angeke bazokhokhisa isiphi isimangalo ukuba ukuphelela noma ukuhambisana nesikhathi, ukunemba kanye ukulingana kwaziswa kungenziwa okuqinisekisiwe. Umbhalo akumiseleli iseluleko udokotela noma wemithi futhi akumele zisetshenziswe njengesisekelo uphethwe ezimele futhi ekuqaleni, isichibiyelo noma ekuvalweni kwe-ekwelapheni izifo. Njalo uxhumane nodokotela othembela ezindabeni zezempilo noma izikhalazo! Thina futhi abalobi bethu abayamukeli yimaphi ngokuphazamiseka noma ukulimala ezivela ukusetshenziswa kwaziswa lapha.
Isilinganiselwa: 3.0/ 5. Kusuka ku-1 ivoti.
Isihloko sangaphambiliniIPhone X
Isihloko esilandelayoI-Sango sea coral